Mining ponesa equipments
Mining rutsigiro equipments
Mining akashandisa simba equipments
Underground waigona equipments
Underground senga midziyo
Robit anotevera kukura yose
Post nguva: 06-06-2018
Robit akataura kuti izvi zvichaita yekudyidzana kusimbisa zvayo DTH mabhizimisi nzvimbo, uye pamwe acquisitions maviri, chekambani tinofanira kugara mambure rokutengesa kuchapfuura € 75 miriyoni (US $ miriyoni 83). Maererano Robit, ivo acquisitions vari chinokosha yayo yose kukura nzira, uye zviri looki ...Read more »
Atlas Copcoconsolidates Chinese migodhi akavhiyiwa
Kambani akati Kutama kuchawedzera kunyatsoshanda uye kusimbisa boka yeramangwana. Atlas Copco uchaisa Zvivako yaro muna Shenyang, iyo manufactures kazhinji ruoko-akabata dombo drills kuti migodhi uye kuvaka, kutama akavhiyiwa kuti chirimwa muna Zhangjiakou. In Shenyang, vanenge 225 pe ...Read more »
Nomupedzachose discontinues njanji drills, halts mumba uye mbiru kugadzira
The kambani yakataura kuti kudzidza inokosha inotsiva kuchaita kuti pfungwa zvigadzirwa avo nepfungwa kukura mukana. Nomupedzachose akawedzera kuti kambani yayo navatengesi arambe akazvipira huripo vatengi uye achakutsigira avo mumba uye mbiru uye njanji chibooreso fleets pari ...Read more »